नछोड त भन्दिन म गजल ! रुगुम खड्का - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com नछोड त भन्दिन म गजल ! रुगुम खड्का - नागरिक रैबार
मलाई छोडि अन्त नाता नजोड त भन्दिन म
जीवन जिउने चोखो नाता नतोड त भन्दिन म
दोबाटोमा मलाई छोडि तिमि खुसि हुन्छौं भने
बसाइ सार य‍ो मनबाट नछोड त भन्दिन म !!
महगोलाई खोज्दै हिड मेरो माया सस्तो माने
बलगरेर पराईसित तिम्रो नाता नमोड त भन्दिन म
त्यो मनलाई यो मनबाट तर्साएर हिडेपछी
पराईको बगैंचालाई नगोड त भन्दिन म !!
नाम : रुगुम खड्का
ठेगाना : बुडिगङ्गा ८ बाजुरा
फोन : ९८४८६३१३२९
आमाको छात्रबासमा मनाए मन्त्री शाहले ४८ औं जन्मोत्सव
मानब मानब बीचको चर्चा बनाइदिन्छ
१ शान्त भएको मनलाइ बिचल्ली बनाइदिन्छ अन्याय र अत्याचारले त्रसित बनाइदिन्छ ।। विज्ञापन कतिसम्म हो यस्ता कुकार्य भोग्ने र सुन्ने । मानब मानब बिचको चर्चा बनाइदिन्छ ।। २ अन्याय र अत्याचार बिरुद्ध सबैले बोल्नुपर्छ । मानबबिचका हकहितका कुरा सबैले खोल्नुपर्छ ।। म चुप बसे, तपाइ चुप बसे बोल्ने आखिर को छ। समाज समाजका बिभेद […]
स्वबियु सभापतिको मनछुने कविता
“जात” मानिस हामी भन्दछौ जात एउटै रगत नेपाली धर्ती जन्मिए पछी उही हो जगत ! मानव भइ जिउने हामी समान बन्नुछ कुप्रथा बाट हुर्केका जडा आफैले खन्नुछ !! कसले ल्यायो जात र भात जानुन कानुन हाम्रो भन्दैन त्यस्तो सबैले मानुन !!! श्रम र सीप चल्दछ भने पानी नी चलाउ पुरानो रीत मान्दैन भनी आगोमा जलाउ […]
दलितकाे कानुन किन छैन नेपालमा ?
जातकाे नाममा अझै छ दण्ड याे नेपालमा बाेल सरकार दलितलाई कानुन किन छैन नेपालमा । काहाँ लुक्याे गणतन्त्र याे नेपालमा जातिय छुवाछुतकाे भेदभा अझै छ नेपालमा ।। नत नियम लागू हुन्छ न सजाए नेपालमा जति बेला दलितले मरेई पाउनु याे कस्ताे नेपालमा । विज्ञापन दलितकाे शरीर जल्ने तर जात चल्दैन रे नेपालमा । श्रम चल्छ […]